Imithetho Yensangu yaseFlorida - Amalayisense Wensangu eSunshine State
Ummeli Webhizinisi Lensangu Uchaza Imithetho Yensangu Yezokwelapha eFlorida
Yilalele ku-PodCast noma ubuke i-YouTube ku-Florida Cannabis Laws Ukuze uthole ummeli othile we-Florida Cannabis esixoxa naye - vakashela UMnu Cannabis Law, uDustin Robinson, kuwebhusayithi yakhe: Mnu Cannabislaw.com
“Imithetho Yensangu yaseFlorida” bahlushwa abantu asebekhulile kakhulu futhi abalondolozayo abasabambe isigcwagcwa nje mayelana nensangu, ebizwa ngensangu ngokusemthethweni esifundazweni saseFlorida. IFlorida inohlelo olunamandla lwensangu lwezokwelapha oluneziguli ezingaba ngu-300,000. Ukugunyazwa ngokuphelele kwensangu eFlorida mhlawumbe kuzovela ohlelweni lokuvota njengoba umthetho wayo wezinambuzane wezokwelapha waba khona - funa u-2022 ukuze uvotele ukugunyaza insangu eFlorida.
Yimiphi Imithetho Yamanje Ye-Cannabis?
Yimiphi Imithetho Ye-Cannabis eFlorida Ezoshintsha ngo-2020?
Namuhla sizokhuluma ngakho konke ngemithetho yensangu yaseFlorida. Sanibonani nonke, igama lami nginguTom Howard. Uma kukhona okudingayo, ungammela i-Google Cannabis Lawyer futhi uzokwazi ukungithola. Kepha namhlanje sinesiqephu esikhetheke kakhulu. Sizokhuluma ngakho konke ngemithetho ye-cannabis yaseFlorida noDustin Robinson. UDustin, siyabonga ngokujoyina nathi.
UDustin Robinson - Ummeli Ophezulu Wensangu eFlorida
Yebo, uyazi ukuthi kunjani leyo ndima. Ngenhlanhla senza kangcono kakhulu kunangaphambili. Noma kunjalo, yilokho okwenzekayo uma unombukiso wasogwini nolwandle. Uvelaphi uDustin?
Ngilapha eFlorida. NgiseNingizimu Florida enelanga. Isimo sezulu esihle lapha ngaphandle.
Ngakho-ke awugqokile amabhulukwe afakwe uboya njengoba ngilapha ngoba kufana nama-degree angama-25 ngaphandle.
Yebo, cha, kuhle. Bengiphumile esikebheni izolo. Namuhla usuku lomsebenzi. Ukukhanya kwelanga okuhle ngaphandle kwewindi.
Kwenzekani Ngemithetho Yensangu eFlorida?
Sinezinto eziningi ezahlukahlukene ezenzeka lapha eFlorida, kusobala ukuthi asizibali lezo zinto eziqhubeka ohlangothini lwe-hemp. Sinezinto eziningi ohlangothini lwensangu. Umlando omncane osheshayo lapha eFlorida. Sinikeze ilayisense eziningana, esikubiza ngokuthi Ama-MMTC ezansi lapha, Izikhungo Zokwelapha i-Marijuana Medical. Lawo amalayisense ahlanganiswe ngokuqondile lapha eFlorida. Babenamalayisense eMnyangweni Wezempilo. Futhi-ke emva kwalokho kube nezingqinamba eziningana lapha eFlorida. Ngakho-ke manje njengamanje sinamalayisense angama-22 futhi inqwaba yalawo malayisense anikezwa ngezivumelwano zokuxazululwa, ngaphandle kwe- [crosstalk 00:01:47], usho lokho futhi.
Kuyathakazelisa lokho, ngoba lapha e-Illinois bacabanga ukuthi kufanele ngabe benza kanjani isabelomali sokumangalela umbuso futhi banamalayisense athe xaxa enhlobo eyakhelwe phezulu. Ngakho-ke ngiyazibuza ukuthi ngabe izivumelwano eziningi zokuhlala kuzoba ngamalayisense yini?
Yebo, kulungile, ngingasho ukuthi noma yimuphi umbuso owenza amalayisense udinga ukwaba izinsizakusebenza ezibalulekile zokumangalelwa. Ngiyazi ukuthi iMissouri isanda kumemezela abawinile. Bengisebenza namaqembu ambalwa kuzicelo zaseMissouri kanye nababhali bezicelo ezinhle, lapho beyilungisa, bayayihlela ukuze bakwazi ukuzilungiselela ukuthi bakwazi ukuletha imbangela yesenzo kuze kube ungayitholi ilayisense. Ngakho-ke lelo isu elisetshenziswa abantu abaningi. Futhi lapha eFlorida amalayisense ayebaluleke kakhulu. Ngisho ukuthi sine-
Ukuhlanganiswa okuqondile kwamabhizinisi e-Cannabis eFlorida
Yebo. Ngakho-ke uzothola… Ucezu lwephepha beluthengisa ngamarandi ayizigidi ezingama-60. Yilokho kuphela, akukho ukuthengiswa kwezindlu, akukho ukusebenza. Ngakho-ke ngokuningi kulayini, abantu abanandaba nokukhokha imali eyizigidi ezingama- $ 1 kummeli ukuzama ukuthola lelo layisense le- $ 50 million. Ngenkathi kwamanye amazwe, inani lelayisense lingahle lingabi phezulu. Uma unesiqephu sephepha, ake sithi, ama- $ 500,000 noma isigidi, ungahle uthambekele ekukhokheleni ummeli amacala amakhulu amakhulu kuwo. Kepha uma amalayisense ebiza izigidi ezingama-50, ufana nokuthi, "Uyazi ini, ngizokuthathela." Futhi kwesinye isikhathi abanye abantu baxhasa lelo cala elibona amathuba-
Ima kancane. Futhi akukhona lokho… Cha, akusilo iqiniso lelo. Kuyini lapho, linda… inkundla eyinkunzi futhi ngeshwa kuzofanele sifunde amagama asemthethweni we-arcane. Ngakho-ke abantu bebengavunyelwe ukwenza lokho. Kuyinto esemthethweni, inqaba nokugcinwa. Yebo, ngombono awufanelanga ukwazi ukwenza i-Champerty kufana nokuzibandakanya phakathi kwephathi yebanga ukukhuthaza ukumangalelwa. Kulungile lokho yilokho. Kepha empeleni luhlobo olufanayo lwento lapho omunye umuntu ongeyena umuntu ohlobene necala anentshisekelo yezezimali kulo. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi bavumela umpetha eFlorida?
Ngangingakaze ngizwe lelo gama. Kepha ngiqonde ukuthi, ekugcineni kosuku, kuvame ukuthi kube nezikhathi lapho abantu benamacala futhi abakwazi ukuwaxhasa kanti abanye abantu bangena bezokhokhela icala ukuze bathole okuthile. Ngakho-ke, ngicabanga ukuthi into yasebukhosini mhlawumbe igxile kakhulu kulokhu-
O, kusuka ezikhathini zobuqili-
Kepha ngakho-ke ucabanga ukuthi kungahle kube nokungafanele uma uphuma futhi uzama ukuthola abantu abazofaka icala enkantolo? Kungenzeka ukuthi yilokho okuhloswe ngakho, kepha lesi yisibonelo lapho abantu befuna ukufaka icala. Babengenayo imali enkulu yokusebenzisa imali eyi- $ 1 million kuyo. Ngakho-ke bangena bathola abatshalizimali ababezimisele ukukhokhela icala ukuze bathole ukulingana okuthile. Bese bathola ilayisense futhi bakwazi ukuyiphenya ngama- $ 55, $ 60 million. Kusobala-ke manje ukuthi bakhiphe… Basanda kukhipha amalayisense amasha ayisishiyagalombili ngokukhokha. Babizwa ngokuthi izikhombisi esisodwa. Laba ngabantu abazuze amaphuzu ngesikhathi sokuqala kwenqubo yokufaka isicelo. Ngakho-ke njengamanje sinamalayisense ayisishiyagalombili kwabangu-22 amasha amasha futhi bazama ukukhulisa imali yokwenza inkampani edidiyelwe. [crosstalk 00:05:08] Kubiza cishe u- $ 20 million.
Uma uthi mpo, usho ukuthi ziyakhula, ukuthi ziyagcina, ukuthi ziyacubungula, zonke zimunye, akunjalo? Futhi leso yisakhiwo seFlorida.
Yebo, ngakho-ke okuhlanyayo eFlorida kufanele bakwenze, kufanele bakhule, bacubungule, bakhiphe futhi bahambise. Futhi awukwazi ukukhipha noma iyiphi yalokho. Ngakho-ke akufani nokuthi kukhona izinkampani ezilethayo ezilethayo. Ibhizinisi ngalinye ngalinye linenkonzo yalo yokulethwa. Futhi ungacabanga ukuthi lokho kungasebenzi kahle uma unomakhelwane abathile ababili eduze komunye nomunye. Eyodwa i-oda kusuka emtholampilo owodwa, enye i-oda kusuka kwesinye isiphuzo futhi uthole izimoto ezimbili ezishayelayo ukuze zisondele. Kungaba nomqondo ophelele uma ngabe kukhona ukulethwa kwezidingo okwakwazi ukucosha kuzo zombili lezo zikhungo emotweni eyodwa. Futhi-ke kukhona ukungasebenzi kahle okuthile futhi kunezikweletu ezimbalwa kulesi seshini esilandelayo somthetho futhi bezama ukuthola. Kukhona inkantolo Ephakeme yaseFlorida, ngakho-ke izinkantolo eziphansi zibone ukuthi leso sakhiwo siphikisana nomthethosisekelo wethu waseFlorida.
Yenzani iFlorida, ngoba ake sixoxe ngokuthi iFlorida yaba kanjani yisimo sensangu yezokwelapha.
Yaqala Kanjani Insangu Yezokwelapha eFlorida
Kuzwakale kakhulu njenge-West Virginia. Besikhuluma ngemuva, eWest Virginia, awukwazi ukuthola imbali, awutholi ngisho nemiphunga, akukho lutho olubhemayo futhi kufanele ucubungule. Ingabe iFlorida yaqala kanjalo? Awuzange uvunyelwe ukuba nembali?
Yebo. Ngakho-ke, eFlorida, empeleni ngisebenza kuhlelo lokusebenza lwaseWest Virginia khona manje futhi yebo, yindlela iWest Virginia ebukeka ngayo. Futhi, iFlorida iqale kuphela ngemithamo elula kakhulu futhi ephansi. Kepha esikutholile ngokuyisisekelo ukuthi, kube nokuchibiyelwa komthethosisekelo. Ukuchitshiyelwa koMthethosisekelo ngokuyisisekelo kuthiwe la maMMTC, iZikhungo Zokwelapha Zensangu Yezokwelapha zingakhula, zisebenze, zikhiphe noma zilethe. Ngakho-ke yayinegama lelo noma kumthethosisekelo wethu waseFlorida. Bese kuthi ngo-2017 lapho isishayamthetho siyokwenza lesichibiyelo somthethosisekelo, bakubiza kanjalo… Bathe iyakhula, iyacubungula, ikhiphe futhi ihambise, ngokuyisisekelo idala le nhlangano edidiyelwe okumelwe ibenze bonke.
Umehluko phakathi kokuhlangana nokuphoqelekile uma kuqhathaniswa nokuvumela. Esinye sazo sihlangene kanti esinye, anginasiqiniseko sokuthi bakubiza kanjani.
Yebo, ngibuzwa okuningi ngaleli cala lasenkantolo futhi [inaudible 00:07:38] futhi othile ufana nokuthi, “O, kunzima kakhulu. Angidingi ukwazi izinto ezisemthethweni. ” Nginjengokuthi, “Cha, kulula kakhulu. Umehluko phakathi kwe- an noma i-. Umthethosisekelo usebenzisa igama noma okusho ukuthi ungalima, ucubungule, ukhiphe noma uhambise. Umthetho waseFlorida ungene futhi wasebenzisa leli gama futhi, okusho ukuthi inhlangano idinga ukwenza zonke lezo zinto. ” Ngakho-ke njengamanje inkantolo Ephakeme yaseFlorida iyaqhubeka nalelo cala futhi zonke izimpawu zikhomba kubo eziqinisekisa leso sinqumo, okungasho ukuthi ukuhlanganiswa okuqondile kuzophulwa futhi kuzodingeka babuye bazokwakha isakhiwo esivundlile lapha.
Kuyinto yokuhlangana ngokuqhathanisa nokuhlangana. Ngakho-ke isihlanganisi siyi-, futhi okuhlanganisayo ngu- noma. Cha ngiyayithanda. Lokhu kufana, ngoba kungumgogodla wayo. Sikhuluma ngokugunyazwa kwe-cannabis ngokombono wezomthetho ngokungafani nombono wenqubomgomo. Kepha kunenqubomgomo eningi eqhubekayo kulezo zingxoxo. Futhi njengaseFlorida noma e-Illinois, sizoba namacala enkantolo futhi ulwe nencazelo yegama futhi noma, ngiqonde ukuthi yilokho okuyikho ngokoqobo. Futhi uma bethi, “Noma,” kufanele kube kuleyo ndlela yokuzihlanganisa lapho. Futhi ngakho-ke ngokuyihlanganisa ngokuqondile bese futhi ngokwakha ku- $ 100,000 eyengeziwe, $ 250,000 yokumangalela umbuso ukuze ukwazi ukuthola ilayisense. Lokho kubeke intengo yelayisensi ye-cannabis, hhayi kuphela e-State of Florida, kepha noma yikuphi lapho kuphakeme kakhulu kunalokho obekufanele ngabe kukhona noma kungaba njalo.
Yebo, yebo, yebo. Amalayisense aphakeme kakhulu futhi athembekile impela, umnyango wezempilo usebenzisa imali eningi ekubangeni lokhu futhi abanazo izinsiza zokukwenza. Futhi kususa isabelomali sabo ukuphoqelela empeleni izinhlinzeko okufanele iMMTC izilandele. Ngakho-ke empeleni akukho ukuphoqelelwa okuningi njengoba kufanele kube njalo, ngoba i-DOH ayinazo izinsiza.
Akukwenzi. Kungukuqonda kwami ​​ukuthi kunabadlali abane kuphela eFlorida. Kuyiqiniso lokho? Njengokuthi bangaki-
Ngakho-ke ilayisense langempela lalifana, ngicabanga ukuthi babenamalayisense abadlali abane noma abahlanu. Ngakho-ke labo bafana babe nesihloko esikhulu emakethe. Bese kuthi ngokulandela lokho banikeze amalayisense, futhi manje sesinamalayisense afinyelela kuma-22. Njengamanje cishe kuphela eziyisishiyagalombili noma eziyisishiyagalolunye ezisebenza ngempela. Kulezo eziyisishiyagalombili noma eziyisishiyagalolunye, ezine noma ezinhlanu zazo zibusa ngempela, ngoba zazinekhanda elikhulu kakhulu.
Ngakho-ke ayikho i-cap, ngakho-ke i-dispensary ne-statute, bathi ziboshwe ezindaweni ezingama-25. Ngakho-ke ngeke zikhule nje kuphela, zicubungule futhi zikhiphe, futhi ngokungafani nase-Illinois lapho zibekelwe khona ubukhulu bazo bobungcweti ezinyaweni eziyizinkulungwane ezingama-5,000 25. EFlorida, awubekiwe ekukhuleni kwakho. Awunamakhono wokucubungula kwakho. Futhi ekukhipheni, ukhawulelwe ezindaweni ezingama-100,000. Kepha uma ufika ku… Njengoba sifika ku… Zonke iziguli eziyizi-300,000, uthola eminye imikhandlu emihlanu. Ngakho-ke manje sesingaphezu kweziguli ezingama-25. Ngakho-ke ngayinye yalezi zinhlaka ezihlanganiswe mpo ingaba nama-40 kanye ngokuyisisekelo ngama-dispensaries angama-XNUMX.
Futhi bekukhona amacala athile avumela abanye balabo bantu abanamalayisense ukuthi bavule ngisho nemishina eminingi. Ngakho-ke yingakho bekhuluma ngamalayisense amakhulu. Futhi kubiza ngokusobala inani elikhulu lemali ukuthi lingagcini ngokukhula, hhayi kuphela ukucubungula, kodwa futhi nokuzama ukuvula zonke lezi zindawo zokuhambisa, ngakho-ke.
Kwakungebona abantu abane, kwakungamadoda amane aseFlorida. Futhi-ke kwakungebona labo bantu abane. Akufani nokuthi kunabafana abane abahlezi, abahleli kwizigidi ezingama-20 umuntu ngamunye futhi bonke bayaphonsa. Lezi bekufanele kube izinhlangano ezahlangana zafaka imali eningi nethalente eliningi emgwaqweni, ngoba uma kungenjalo ' Ngeke ngikwazi ukukhula ngokushesha okukhulu.
Yebo, ngisho ngisho nokukulungisa lokho, akusiwo ngisho amadoda aseFlorida. Futhi yilokho abantu abaningi eFlorida abakucasulayo ukuthi amalayisense anikezwa abalimi lapha eFlorida futhi kwakukhona izidingo ezithile zokuthi babenenkulisa iminyaka engu-30. Kepha kuthe lapho bethola leyo layisense bathengiswa kuma-MSO amakhulu. Ngakho-ke njengamanje, eFlorida, wonke amalayisense asebenzayo aphethwe ama-MSOs amakhulu kakhulu angahlangene. Akubona abesilisa baseFlorida, ababona abantu baseFlorida. Akuzona ngisho izinkampani zaseFlorida. Amabhizinisi amakhulu nje. Kepha uyazi, ekuvikeleni komlimi, abantu abaningi banikeza laba balimi ukunethezeka okuningi ngokuthengisa la malayisense. Kepha iqiniso ukuthi, njengoba ukubhenka kuyinselele njengoba injalo futhi njengoba kuhlanganiswe mpo futhi kubiza kakhulu ukuze kusebenze, laba balimi, abanye babo kungenzeka babe ngabalimi abacebile, bangaba nesigidi esisodwa noma izigidi ezimbili, bayanikela nginezigidi ezingama-20.
Ngakho-ke abananketho. Abakwazi ukuya ebhange ukuyothola imalimboleko. Akunanketho ngaphandle kokuyithengisela ukulingana. Futhi yilokho abakwenzile. Ngakho-ke, angicabangi ukuthi empeleni yiphutha lomlimi. Ngicabanga ukuthi lonke uhlelo lwalunamaphutha amancane. Kepha uyazi ukuthi, ekugcineni kosuku uhlelo olusha futhi ngicabanga ukuthi iFlorida empeleni yenza umsebenzi omuhle impela. Ngicabanga ukuthi ukuhlanganiswa okuqondile kusizile ngezinkinga eziningi ezahlukahlukene. Kepha ngicabanga ukuthi sesifikile lapho kufanele sishintshe siye kokuvundlile.
Ngabe ucabanga ukuthi ... ngiqonde ukuthi, uma zingashintshi phezu kokuvundlile noma zikunikeze ithuba elithe xaxa laba bantu, labo bantu abane bazobuka nje ukuthi abalimi abahle bayazi kahle bese bezithenga. Ngisho, empeleni bazokwenza, uma kungekho cap, ngoba lapha eWashington sine-
Ngakho-ke lokhu okushoyo, ngokungafani ne-Illinois lapho sinalawa ma-caps mayelana nokubamba ilayisense ngakho-ke akekho umuntu ongalawula imboni. EFlorida kubukeka, futhi kuzwakala sengathi eWashington unenkinga eqonde ngqo lapho unabadlali abathile abakhulu abahlanganisa iningi lezinto ezenzekayo. Futhi-ke akunakwenzeka ukungena emdlalweni.
Yebo. Futhi ukucacisa nje, eFlorida akukho bhizinisi elilodwa elingaba nenzalo engaphezu kuka-5% kwilayisense elilodwa. Ngakho-ke akufani nokuthi ubungakwazi… Ibhizinisi elilodwa eFlorida lingathenga enye ilayisense. Kepha yebo, ngiqonde ukuthi ayikho ikepisi.
Cha, amalayisense kufanele ahlukaniswe. Ngakho-ke asikho ngempela isizathu sokuthi bahlangane ngaphansi kwelayisense eyodwa. Ngisho ukuthi lelo layisense linenani elibiza u- $ 50 million. Ngakho-ke kungani ungawahlanganisa nelayisense elilodwa ngenkathi unenani elingaka? Ngakho-ke, ngiqonde ukuthi ubona abanye abanjengoMedMen, benze nje ukudilizwa okukhulu lapha. Ngiyazi ukuthi bebenezinhlelo ezinkulu zemitholampilo yabo futhi badilize inani elikhulu labantu. Futhi impela iningi labo, iMedMen neSurterra bebexhasa ngezimali isicelo esingezansi sokuzithokozisa, futhi babeka imali enkulu, futhi kusobala ukuthi babebheja kwezokungcebeleka ukuze badlule-
Kwenzekani ngokugunyazwa kwezomthetho kwezokungcebeleka eFlorida ngo-2020?
Impela. Ngakho-ke kwakukhona amaqembu amabili alawula iFlorida bese kuba nesicelo se-MILF. Ngakho-ke lawula iFlorida iqale kahle kusenesikhathi. Inkinga yabo bekungukuthi bebengakutholi ukuxhaswa kwabanamalayisense angama-22, ngakho-ke bebengenayo imali yokuthola amasiginesha. Udinga amasiginesha angaphezu kuka-700,000 ukuze ukuthole ebhodini lokuvota lapha eFlorida. Futhi bakhuphuke bafinyelela ngaphezu kwenkulungwane eyikhulu, kwafika ekubuyekezweni kwenkantolo ePhakeme, okwakujabulisa ukuthi bakwazi ukufika kulelo qophelo. Kepha-ke iMILF yafika yakhokhelwa futhi baxhaswa ngabakwaMedMen naseSurterra futhi abantu abaningi babephatheke kabi ngolunye ulimi olukuleso sicelo. Ngangiphatheke kabi ngoba ngifuna nje ukuthi wonke umuntu asebenze ngokubambisana. Kuyakhathaza kakhulu ukuthi silwa sodwa ukube sonke besingahlangana nje.
Ngakho-ke manje usunolawulo lweFlorida olunamasiginesha ayi-100,000. Unama-MILFS anamasiginesha ayizinkulungwane ezingamakhulu ambalwa. Isikhathi besikhathaza, empeleni bekufanele babe nemali ethile ngoFebhuwari, bebengeke bayishaye. Ngakho bakhothama ngokuyisisekelo. Ngakho-ke kuyishwa, bathole ithuba lokuhlangana futhi ngicabanga ukuthi ukube bahlangana besingakubona kusemthethweni. Inkinga enkulu ukukhula ekhaya. Ngiyazi ukuthi usanda kusho ekuqaleni kombukiso ukuthi uzama ukulwa nasekhaya. Isicelo se-MILF sasingenalutho lapho esihlobene nokukhula kwekhaya, ukulawula iFlorida.
Manje usho lesi sicelo se-MILF, ngabe usikhiphile isicelo se-MILF? Ngoba ngizwa i-MILF futhi ngifana, "Ngicabanga ukuthi lokho bekufanele kuthole amasiginesha amaningi, ikakhulukazi eFlorida." Kusho ukuthini lokho?
Uyazi ini, ngikubiza ngesicelo se-MILF. Umbuzo omuhle.
Ukugunyazwa kwensangu eFlorida. [crosstalk 00:15:50] Kepha iqiniso lokuthi uthe i-MILF, obekufanele kube ukuphambanisa kwabo, bekufanele bakuthengise ngemuva kwalokho, ngoba [crosstalk 00:15:59] -
Futhi une, usukhulume ngakho. Yebo, kepha lokho kungudaba lapho uthanda khona, “Kulungile, ngakho-ke unalezi zinhlelo ezimbili ezincintisanayo [inaudible 00:16:08] bese wenza nje, wenze umsebenzi wakho kanzima kabili. Futhi-ke futhi, ngabe ukukhula ekhaya kwakuzohlinzekwa kweziguli zezokwelapha noma ngabe ikuphi? Noma kwakuyini inkinga yokukhula kwekhaya lapho enye yahlukana kwenye?
Ukulawula impela iFlorida kwakuwukunyakaza okuyisisekelo komuntu wansuku zonke lokho, empeleni okufuna ukugunyazwa kwensangu. Inhlangano ye-MILF yayisekelwa ngempela yiMedMen neSurterra futhi kwaba yinzuzo yabo ukungafaki noma yini ehlobene nokukhula kwekhaya. Vele bazophikisana nokuthi bebethule maqondana nokukhula kwekhaya futhi bazokuyekela isishayamthetho futhi bebenezizathu zabo zokushiya ikhaya zikhule ngakho. Bathe kuzobanzima ukuchibiyelwa komthethosisekelo futhi ukuze uthole ukuchibiyelwa komthethosisekelo ufuna ukukugcina kulula futhi bafuna ukukugcina, njengoba isicelo seMILF besilula ngokweqile, sifushane kakhulu. Lawula isicelo seFlorida besiside ngokwedlulele ngemininingwane emikhulu ngokwedlulele kuso, ngakho-
Umbuzo enganginawo mayelana neFlorida kanye neWashington State unjengawo futhi [inaudible 00:17:11] awusiyo. Ngicabanga ukuthi ngumbuzo oyingxenye ezimbili. Okokuqala, ngabe isishayamthetho eFlorida singakwazi ukwenza isenzo sabo ndawonye futhi bahlanganise umthetho? Ngoba uma ukhuluma ngokuvota, lokhu kungaba yingxenye yesibili. Ubeka lokho okufanele kuchitshiyelwe umthethosisekelo kulokho futhi imvamisa imfishane. Ngubani ohumusha lokho, futhi enze imithetho ukuze empeleni ibe irubrikhi yomthetho njengoba sinayo noma siyidinga nge-cannabis njengemboni?
Yebo. Ngakho-ke njengamanje uSenator uJeff Brandes ukhiphe umthethosivivinywa weSenate 1860 osetshenziselwa abantu abadala, empeleni esigcawini sokugcina sommeli wendlu uMichael Grieco, naye wakhipha umthethosivivinywa wokuzijabulisa. Wayazi ukuthi akunjalo, ngingumngane noMichael, wangitshela ukuthi ayinaso ngempela isibhamu. Kodwa ubefuna ukuthumela umyalezo, "Hheyi, lokhu yinto okungenani esifuna ukuba nayo njengengxenye yengxoxo ngonyaka owedlule." Ngakho-ke kulo nyaka uJeff Brandes wafaka lo mthethosivivinywa u-1860. Yibhili enhle. Ngiyayeseka. Inayo, ngiyazi ukuthi sikhulume kakhulu ngezinhlaka zokulingana komphakathi zomthetho wase-Illinois. Inengxenye, ivumela ukukhishwa kwezinto zobugebengu. Ngakho-ke ngezinga elithile kukhona ingxenye ethile yokulingana kwezenhlalo lapho-
Kepha akunikezi maphuzu kubafakizicelo ukuthi baboshwe insangu noma yini.
Impela, yebo. Ngiqonde ukuphuma e-Illinois, njengoba wazi, uthola ama-20% wamaphoyinti uma ufaka isicelo nomuntu onobunikazi nokuphatha kwaleyo bhizinisi. Futhi-ke lelo inani elikhulu lamaphuzu. Ngakho-ke noma ngubani ongafaki isicelo ngokulingana kwezenhlalo muhle kakhulu, abanalo ithuba. Ngakho-ke abazange babele noma yimaphi amaphuzu. Kunjalo-
Uzodlala, kuyisakhiwo sokuncintisana selayisense.
Yebo, futhi iqiniso ngukuthi ngesishayamthetho sethu esigcina umthetho njengamanje, mancane kakhulu amathuba okuthi sidlule kusishayamthetho. Kungenzeka impela ngokuchibiyelwa komthethosisekelo. Kepha uyazi ukuthi, kule mboni, ngeke wazi. Ngakho-ke uyazi, nginethemba. Ngokusobala ngigcina umkhondo wokuhamba kulo mthetho oyilwayo. Baseseshini manje ngakho-ke bayahlangana futhi bayakhuluma ngakho.
Mhlawumbe ngeke kugcine kufomu ekuyo njengamanje. Izodlula ekubuyekezweni okuningana okuhlukahlukene kuze kube yilapho ikwenza khona futhi ivunyelwe. Kepha kuyithuba elikhulu. Futhi okuthakazelisa ngempela ngakho futhi, into enkulu eFlorida ukuhlanganiswa okuqondile. Abavunyelwe ukwenza isivumelwano nganoma yini. Ngakho-ke kusukela ekukhuleni, ekuqhubekeni nasekuhlinzekeni, abakwazi ukukhipha noma iyiphi yalezi zinsizakalo.
Umthethosivivinywa weSenate wango-1860 ubavumela ngokusobala ukuthi bakhiphe ezinye zalezo. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi kuzoba nabahlinzeki bezinsizakalo manje abangangena futhi benze isivumelwano nalezi zinkampani ezinamalayisense. Ngakho-ke abantu abaningi badinga ukuqonda ukuthi ngezinga abafuna ukuthutha ngalo, kuzoba namathuba okuthi izinkampani zivele ezisebenza kakhulu ngokuthuthwa kwensangu nokuthi okwamanje ayitholakali lapha eFlorida njengamanje.
Usho ukuthi ungusopolitiki osadla ngoludala, futhi uma ngicabanga iFlorida, ngicabanga ukuthi abantu abadala kanye ne-conservatism nayo yonke imali ezansi lapho. Bengihlala eJersey, ngakho-ke ngijwayelene nalowo mqondo wabantu nokuthi yini. Ngabe ucabanga njengomhlali ukuthi yini futhi ungumuntu obuka ipolitiki yakho, ngabe kuningi okubuyiselwa emuva okuvela kuBig Pharma? Ngiqonde ukuthi, kwenzeka kanjani ukuthi abantu abaningi bangafinyeleli kubantu bakho abadala bokuvota, ngoba lowo muntu olandelanayo, ngiqonde ukuthi, senza insangu ibe yinto engathandeki. Akunjalo, kufana namafutha. Kungcono kunotshwala. Kufana nokuthi ekugcineni lapho sifika emthethweni esisifunayo sonke, kuzoba njalo, ungayithenga njenge-broccoli, akunjalo? Njengekhilogremu ngamasenti angama-50, ngoba abantu abaningi bayakhula.
Masenze okungenani umugqa ku-vodka, njengamakhadi we- [inaudible 00:21:09]. Kuzoba imboni ebizayo futhi. Kepha ungangena kukho.
Bheka, uma ubheka ezingeni likahulumeni, uzobona ukuthi zombili izinhlangothi seziqala ukuhlangana ngalolu daba. Futhi ngicabanga ukuthi uqala ukukubona lokho eFlorida, futhi uyakubona lokho emazweni amaningi ahlukene. Ngakho-ke ngicabanga ngokomlando, kusobala ukuthi bekungabagcini bomthetho ababelokhu be ... Futhi bheka, anginakho okuphikisana nabazigcinayo. Empeleni, ngingumuntu olondolozayo, ngivotela izingqinamba. Kepha kulolu daba oluthile, bakhathele kakhulu, kepha iningi labo selishintshile. Ngikhulume nenqwaba yezishayamthetho ezisazibekile phansi ezishintshile, futhi zingamakholwa. Baye bakhuluma nabanye babantu abadala esinabo eFlorida. Baye baqonda izinzuzo zokwelapha. Abanye odokotela engisebenza nabo baye bazwakalisa izwi labo eTallahassee esifundazweni sethu iCapitol, ngakho-
Ngabe ucabanga ukuthi umyalezo we… ngiyaxolisa, ucabanga ukuthi yimuphi ozwelana nabantu baseFlorida maqondana nemithetho yensangu? Umlayezo wokuthi umuhle kanjani, umuthi osebenzayo, noma umyalezo wokuthi ibhizinisi elihle. Ngoba lapho ngicabanga iFlorida, ngicabanga ukuthi iyadla ngoludala, kodwa ngicabanga ukuthi, “Yebo, kodwa bayakhathalela ibhizinisi. Bayakukhathalela abakwenzayo. Bayazikhathalela izinombolo zabo. ”
Kulungile-ke yingakho noma yimuphi umyalezo ozama ukuwudlulisa, bheka, esikoleni somthetho uhlala ufundiswa ukuthi wazi ukuthi izithameli zakho zingobani. Futhi leyo yinto eyodwa engi ... ngihlala ngazi ukuthi izithameli zami zingobani. Uzokwazi ukuthi ukhuluma nomuntu ofundile kalula yini, umuntu oqonda ezezimali, umuntu ongaziqondi ezezimali. Kufanele uqonde ukuthi ukhuluma nobani. Futhi yebo, izinto ezihambisana nabantu abalondolozayo ukuthi lokhu kuyinto yokwenza imali. Kunamathuba amaningi lapha. Singathola amadola amaningi entela, impela asifuni ukwenza amaphutha enziwe yiCalifornia namanye alawa mazwe ngokukhokha intela kakhulu.
Kepha kunamathuba amaningi ebhizinisi engicabanga ukuthi ahlangana namaqembu alondolozayo kancane. Kepha kubalulekile njalo ukukhuluma ngokunye kokukhubazeka. Enye inselelo lapha phezulu omasipala abaningi abavimbela impela izikhungo zemithi ezivunyelwe kumthetho wethu wezwe. Ngakho-ke ngenze umsebenzi omningi ezingeni lendawo futhi, ngifundisa ezinye zezikhulu zendawo ukuthi kungani kungafanele bavimbe. Futhi kusobala ukuthi okuningi kwalokho kususelwa ekucwaswa. Kufundisa umphakathi nje futhi uzama uku-
Kepha ake sifundise umphakathi njengamanje futhi nami ngibe ngumphakathi, ngoba ngivela e-Illinois lapho singavunyelwe khona ukwenza imizamo yokuvota ukuchibiyela umthethosisekelo wethu. Usithatha kanjani leso sichibiyelo esincane, esincane abasifaka lapho bese udala indwangu yesitimela yomthetho yonke kubandakanya nemithetho yezokuphatha ukuze ukwazi ukuthola ilayisense nokulawula imboni ye-cannabis? Noma imboni yensangu eFlorida?
Konke kuqala ngesikhalazo, ngakho-ke kufanele ubhale isicelo, futhi njengoba ngishilo, isicelo seRegul Florida saside kakhulu. Futhi empeleni uma usudlulile kulokho, ngicabanga ukuthi udinga amasiginesha angaphezu kwama-90,000. INkantolo Ephakeme bese yenza ukubuyekeza kwezezimali bese babuyekeza ulimi, futhi ulimi lokuchitshiyelwa komthethosisekelo kufanele lucace bha futhi kudingakala ukuthi kube nesihloko esisodwa esihlanganiswayo. Akufanele ukhulume ngezihloko eziningi. Ngakho-ke uyazi, uma usudlulile kulokho kubuyekezwa kweNkantolo Ephakeme, uthola ukuthi amasiginesha athola ukuvota, udinga ukuthola amasiginesha angama-766,000 noma into enjalo.
Bese lingena esivotweni, kufanele ulivotele. Bese kuthi abomthetho bangene futhi kufanele [ku-engezwakala 00:24:45] umthetho ongahambisani nalowo mthetho-sisekelo. Futhi yilokho impela icala leNkantolo Ephakeme yaseFlorida elimayelana nokuthi lowomthetho ungene kuphi. Futhi kusobala ukuthi uMthethosisekelo waseFlorida uphakeme kunesitatimende saseFlorida. Futhi lapho kukhona ukungqubuzana phakathi kweSitatimende saseFlorida noMthethosisekelo waseFlorida, kunenkinga futhi leso simiso sithathwa njengesingahambisani nomthethosisekelo. Futhi yisimo esikuso njengamanje.
Kuyenzeka, futhi sekuyisikhathi eside ngibe sogwini lwaseMpumalanga. Ngabe ukuphuka kwentwasahlobo kuseyinto engaphaya kwendoda? NjengoDaytona nakho konke lokho kuseseyinto?
Impela. Ngihlala olwandle lwaseFort Lauderdale ngakho-ke, woza isikhathi sikaMashi, kuyahlanya lapha phansi. Ngizama ukuhlala kude nolwandle ngaleso sikhathi.
Udoti wasendle. Futhi kubangelwa ngabakwaJimmy Buffett abangabanikazi bayo iSunterra noma iSurterra, ukuthi ingenye yezinkampani… Ngakho uBuffett unesenzo esithile emakethe yensangu yaseFlorida.
Yebo, uSurterra ubandakanyekile, futhi ngizokutshela, ngasebhishi, enye yeDeerfield, ngikhulume eDeerfield lapho befuna ukuvimbela izikhungo zensangu nokuthi yini ebabambe kakhulu lapho iMedMen ithenga indawo ebhishi . Futhi iMedMen, bayazithokozisa, bagxila kubo, uma ubabheka kusuka kokumaketha-
Yebo, bayindawo yokudlala insangu yezindawo zokungcebeleka, ngakho-ke babecabanga, “O, eminyakeni emihlanu kusukela manje sonke sizoba nama-spliff, sizobe silalele i-reggae, kuzoba kuhle.
Ebhishi, ukuphola eDeerfield Beach. Futhi lokho kwasabisa abantu baseDeerfield. Futhi empeleni bagcina ngokwenza ukuvinjelwa ngemuva kweqiniso. Ngakho-ke abakwaMedMen babe sebethola indawo yabo, kepha empeleni bayivimba. Futhi empeleni ngicabanga ukuthi leso sinqumo empeleni besiphikisana nalokho abavunyelwe ukukwenza ngaphansi kweSitatimende saseFlorida. Isimemezelo saseFlorida asibavumeli ukuthi babeke… Uma bevumela imishanguzo yensangu, abakwazi ukufaka ikepisi. Futhi engikholwa wukuthi kwenzekile uma ufunda amaminithi alokho kulalelwa engqungqutheleni yaseDeerfield, futhi lokhu kwenzeka kubo bonke omasipala abehlukene, okuyisisekelo sabo sokufuna ukuvimbela izindawo zokukhipha imishini ukuthi babecabanga ukuthi sebenazo.
Ngakho-ke uma umthetho ungakuvumeli ukuthi ubeke ikepisi ngaphambili enanini lemithi, kungani uvunyelwe ukuvumela ezinye izikhungo bese uthi, "Kulungile, sinokwanele, manje sizokuvimba . ” Empeleni kuyinto engaphezulu kwefomu. Kakhulu benza into efanayo. Ngakho-ke uma iMMTC ifuna ukulwa nalokhu kuvinjelwa, ngicabanga ukuthi bazoba necala elihle impela.
Kubukeka sengathi kungumsangano kimi eFlorida kuzo zonke izindawo ukuthi laba osopolitiki be-asinine bavimbela insangu ebhishi. Njalo lapho kwenzeka kabi ngikhumbula ngisakhula okwenzeka eFlorida noma e-Atlanta noma kuyo yonke into embi, okungenani imikhosi ngezikhathi zekhefu lasentwasahlobo yayibhebhezelwa ngotshwala. Ngabe bekudingeka ukuthi kwenzeke okubi okwedlulele edolobheni lakho eligadla ngotshwala ngaphambi kokuthi uthi, "Kulungile, ake sinikeze ukhula oluzihlalelayo ithuba."
Ngenkathi uPhish enza iBig Cypress ukukhala onyakeni omusha, futhi angiqondile ukuthi, “O nkosi yami, kunekhonsathi ye-Phish ethatha amahora ayisikhombisa olwandle, indlela yokuhamba ngezinyawo eFlorida.” Cha, ngisho, kepha lelo hlazo liyindoda yangempela. Futhi leyo nhlamba isakazeke yonke indawo. Futhi-ke uma kulapho abantu beya khona ukuthatha umhlalaphansi, kubuye kuhambisane neminyaka. Ngakho-ke ngiqonde ukuthi lokho kungaba-
Futhi-ke kanjalo nohambo lwakhe lwe-Silver Tuna, empeleni uphandle lapho uzama ukuya ezigodini bese ephula lelo hlazo, kodwa-
Futhi lolo hlazo luyaqhubeka. Ngiqala ukungasuki esihlokweni, kepha ngiyaqala ukuzibandakanya kakhulu nokunyakaza kwamakhowe we-psilocybin futhi empeleni ngethule imali yami engenzi nzuzo evikini eledlule. Sizofika newebhusayithi yethu ngoFebhuwari, kepha inzuzo yethu engeyona inzuzo igxile ekusebenziseni ucwaningo lwezokwelapha nokomoya ukushayela izinguquko zomthetho ezinamakhowe e-psilocybin eFlorida. Futhi sesivele senze igumbi elibalulekile kuyo. Kepha inselelo futhi ukucwaswa.
Kuyafana nensangu, kufanele unqobe ukucwaswa bese uyisho ngokwakho, utshwala, unabantu abaphuza kakhulu futhi bafe ngotshwala-
… Akekho obulawa ukubhema insangu futhi akekho ofayo ngokuthatha amakhowe e-psilocybin. Manje sebengenza izinqumo ezimbi futhi ngicabanga ukuthi yingakho ngithi kudingeka sibe nezinguquko zomthetho ezinesibopho. Abantu abaningi bayayithatha ngaphansi kwesilungiselelo esithile mhlawumbe. Ngakho-ke abantu bahambe phambi kwezimoto nokuningi-
Amakhowe ePsilocybin kanye nokwenza kube semthethweni Insangu
Kulungile, kepha ngoba iyi-gin hallucinate, kepha kubonakala sengathi inezakhiwo zezokwelapha. Kodwa-ke, angikhonjelwe kukho, futhi ngaphambi kokuthi sibuyisele ukunakekela kwethu emithethweni yensangu yaseFlorida, kafushane impela, yini i-psilocybin ehlelwe ngaphansi koMthetho Wezinto Ezilawulwayo?
IPsilocybin inomlando omude emasikweni ethu. Futhi okuthokozisayo ngukuthi ibuyela emuva, ubheka izizwe, zonke izizwe ezinkulu zisazenza kanti ezinye zazo empeleni zivunyelwe ukuthatha izinto ezifana ne-Ayahuasca Burner ngezizathu zokomoya nezinto ezinjalo. Kepha ucwaningo selwenziwe. Futhi ngangena kanjani kukho, engicabanga ukuthi kuyathakazelisa impela ukuthi cishe, hhayi wonke amaklayenti ami, kepha inani elikhulu lamakhasimende ami e-cannabis lalinentshisekelo yokuthola i-psilocybin futhi babenesifiso sokwenza imali, ukukhulisa imali enkulu nokuqala benza izinto ezithile, noma ngabe kuseJamaica. UDenver uvele wayisusa emthethweni. I-Oakland yehlise umthetho, empeleni iChicago yenza namacala abe yicala. IVermont inesikweletu. I-Oregon ithole isicelo somthethosisekelo.
Futhi-ke bengithola leyo mibuzo. Futhi-ke ngokwethembeka impela bengingenayo intshisekelo enjalo, ngoba bengicabanga ukuthi bekuyihlaya. Mina ngokwami ​​angizange ngithathe ama-psychedelics. Ngakho-ke ngikhulume nodokotela bami engibamele futhi ngakhuluma ngodokotela abayisikhombisa kuya kwabali-10, futhi izandla phansi, ngamunye wabo wayengamakholwa amakhulu kunani lokwelapha. Ngakho-ke ngaqala ukwenza olwami ucwaningo futhi ngaqala ukukhuluma nabanye babalimi nomelaphi ngaphandle eJamaica. Ukukhuluma nodokotela bengqondo besayithi ezansi lapha abasebenzisa i-ketamine, abanye odokotela bami bokulawula ubuhlungu abasebenzisa i-ketamine. Futhi ngikholelwa kakhulu kunani lokwelapha manje lamakhowe e-psilocybin kunami ngensangu. Ubufakazi anabo bukhulu kakhulu. Futhi ne-FDA isiqala ukubuyela emuva. Ngakho-ke empeleni kusuka kumbono we-FDA owamukelwa ngokwengeziwe kunokwaziwa nge-cannabis.
Kepha ukhuluma njengokuthwala okuncane, noma kufana nama-shrooms. Ngiyamazi umfana lapha, uzozifaka kuma-capsule futhi ngiqonde ukuthi, ngiyakhumbula ngiseyingane, ukuba yindoda yasekolishi, ungathatha izithandani, ngikwenzele ukuzijabulisa. Njengalokhu kuzoba ubusuku obuhle, ngoba ngithathe okuningi. Futhi kuyinzuzo kwezokwelapha. Ngisho, ukhuluma ngezinto ze-naturopathic. Konke kungasisiza, akunjalo? Ngisho ne-tumeric nakho konke lokhu okunye, konke-
Yebo, into eyodwa engicabanga ukuthi ibaluleke ngempela. Noma nini lapho ngixoxa ngohambo lomuntu kunoma ngubani ngamakhowe e-psilocybin, bonke bakhuluma cishe ngokusankondlo njengoba uyazi, babelana ngocezu lwesikhumba sabo noma bonke banalobu bunye no [inaudible 00:31:49]. Uma ucabanga ngezinto ezintathu eziyinhloko abafuna ukuzilapha ngamakhowe e-psilocybin ukucindezeleka, i-PTSD nokulutha. Futhi uma ucabanga ngempela ukuthi ziyini lezi zinto ezintathu, kukhona okwenzekayo engqondweni, kukhona ukuvinjelwa okuthile. Okuthile akukho lapho. Futhi yini eyenziwa ngamakhowe we-psilocybin, ingabe ikuvumela ukuthi ukuchithe lokho uvule ingqondo yakho uphinde uthole umbono obanzi futhi usethe kabusha ingqondo yakho. Futhi yilokho abakwenzayo eJamaica. Kunezikhungo eziningi zokwelapha ngaphandle lapho oya khona futhi wenza ukuhlehla kwezinsuku eziyisikhombisa njalonjalo [crosstalk 00:32:23] -
Ngiyakwazi engikwenzayo ngemuva kokuthi inkathi yethu yesicelo iphele lapha ngoMashi-
Kepha uyazi, kwamukelekile ukuphuza iphilisi elikhuthaza ukukwenza uthandeke njengoXanax nalokho okungahambisani nephilisi, uhlobo lwalesi sikhumba samakhowe-
Noma leyo ebizwa nge-SSRI, inhlawulo yalowo, kepha ngicabanga ukuthi ukugunyazwa kwensangu eFlorida, e-Illinois, eSeattle. Futhi-ke kubukeka sengathi ukwehliswa komthetho noma ushintsho kumthethonqubo we-psilocybin zihlobene ngandlela thile nokuthi izindlela esasizisebenzisa ku-20th Century ukulawula lezi zidakamizwa zaziziphukuphuku futhi zingalungile. Futhi kusilimazile njengomphakathi ngoba kudale ukuthambekela kokukhathazeka kakhulu, impilo ejwayele ukulutha kakhulu. Futhi empeleni bazokukhuthaza lokho. Ngiqonde ukuthi, uyakhumbula emuva kuma-50s lapho babezothola amaFlintstones abhema osikilidi kuthelevishini, bewathengisela ngokoqobo ezinganeni. Futhi manje sekufanele ulwe nokucwaswa okwadalwa yilelo khulu leminyaka ukuze uthuthuke futhi ufane nokuthi, “Cha, bheka lolu cwaningo lwezokwelapha. Kungani singenzi lokhu? ”
Futhi yini okuthakazelisa ngempela, bengikhuluma nabameli ezweni lonke abahola le nhlangano. Abafana abanjengoNoah Potter, oku-Psychedelic Law Blog kusukela ngama-90s, ngiqonde ukuthi lo mfana uletha imininingwane emikhulu maqondana nama-psychedelics nezinhlaka zezomthetho nezinto ezinjalo. Kepha okuthandekayo ukuzama ukuthola ukuthi yini okufanele ibe nesibopho, futhi ngisebenzisa igama elibhekele lokho, uhlaka lwezomthetho olufanele. Ngeke kufane nensangu, futhi kunesikole sokucabanga esinezishoshovu eziningi abangakholelwa ukuthi kufanele kube uhlaka lwezokwelapha. Ngoba lapho usebenza nohlaka lwezokwelapha, futhi ngikhulume noNowa Potter ngalokhu isikhathi eside futhi une-blog enhle maqondana nalesi sihloko.
Kepha uma ukhuluma ngezokwelapha, kungenzeka ukuthi unesimo esifanelekayo, ngakho-ke uvunyelwe ukukwenza ngokwezokwelapha. Noma uma ungenaso isimo sokufaneleka, uyisigebengu futhi njengesigebengu awuvunyelwe ukukwenza. Futhi indlela uNowa azizwa ngayo kanye nabanye abameli abaningi engikhulume nabo ukuthi kunenani elikhulu kakhulu ngaphandle kwezokwelapha ngamakhowe e-psilocybin, ngokwesibonelo ngokomoya. Futhi yingakho imali yami engenzi inzuzo isebenzisa ucwaningo lwezokwelapha kanye nolwasemoyeni ukushayela izinguquko zomthetho ezinesibopho.
Lokho bekungicasula njalo ngenhlangano yensangu ukuthi bazohlala bebeka i-kibosh kumalungelo okuchibiyela okuqala. Uma othile ethi, "Cha, ngikholelwa ku-cannabis ngenxa yezizathu zokomoya futhi kuyilungelo lami ukwenza inkolo yami ngendlela engifuna ukwenza ngayo." Basazothi, “Nah.”
Futhi kuzo zombili insangu namakhowe, kuyinkinga yokuphila kahle. Ngoba ngiqonde ukuthi, abantu bayayihlukumeza kepha ngasikhathi sinye abantu bangayithatha futhi impilo yabo ibe ngcono ngayo. Senze ubugebengu, iMelika ihlushwa yilokho engingathanda ukucabanga ukuthi kufana ne-Preacher's Daughter Syndrome, akunjalo? Umcindezele konke futhi umgcine ekhabetheni elincane impilo yakho yonke manje, “Hawu shit, sonke sibambene ngoba ngikhohliwe ukukufundisa ukwenza izinto kahle.” Ikhofi isidakamizwa, i-caffeine ezimpilweni zethu zansuku zonke-
Akuyona indlela obekuvame ukuthi kwenzeke ngayo lokho, futhi futhi, isizathu sokuthi angikaze ngingene kumakhowe, ngoba ngenze kanye futhi banginika ama-shits kanye nama-puk ngesikhathi esisodwa. Indlela esabekayo yokuqala. Kepha uyazi,… kuyenzeka. Ngakho-ke, futhi-ke futhi, bekungithola uhlobo lwamabhola akhubekayo, hhayi kulelo zinga, kepha bekungukutshalwa kwesikhathi futhi. Ngokwalokho engikubhekisisile, azinayo yini njenge-shaman okufanele ibe ngumhlahlandlela othile…
Futhi ngizokutshela, kukhona abafana lapha eMiami abakwenzayo. Ngikhulume nabo ukuthi empeleni bangama-shaman phansi lapha ahola abantu kulolu hambo olungokomoya. Kukhona namaqembu ezansi lapha ahlela ukuhlehla eJamaica lapho kusemthethweni khona ngokuphelele. Ngakho-ke, impela, abakhuluma kakhulu ngakho yisethi yakho nokuhlelwa kwakho. Udinga ukuqiniseka lapho betha ukusetha, unenhloso efanele yokungena kukho, futhi kufanele ube nesethingi elungile.
Ngoba imizwa yakho idonselwa kolunye uhlangothi noma kolunye. Ngakho-ke uma usesimweni esesabekayo esizungeze abantu ongabethembi futhi ongabathandi, uzoba nohambo olwesabekayo. Futhi okuphambene nalokho. Uma usesimweni esihle lapho uphakathi kwabantu obakhathalelayo futhi abakukhathalelayo futhi abakufunayo. Futhi yilokho umsebenzi wesangoma, ukuhola ngempela ohambweni.
Futhi ngiyakuzonda lokhu. Kuyahlekisa ukuthi ngizizwa sengathi, eminyakeni emibili edlule bengingeke ngikhulume kanjena. Angisiyo imvubu noma yini efana naleyo. Kepha uyazi
Ukugcwaliseka kwenhlamba yensangu
Kepha lokho akulona iqiniso, ngoba njengamanje ubhekene nesigcwagcwa esilwa naso ngesikhathi sangempela. Ngoba bengingakucabangi lokhu eminyakeni emibili eyedlule futhi abantu beveza lokho, “Bheka, ukucwaswa kwabekwa kimi futhi manje sengikudlulile lokho. Ngibe sengibona ukuthi bekuyinkunzi nje. ” Kodwa [crosstalk 00:37:05] yemisebenzi leyo nhlamba isebenza indoda.
Ngezidakamizwa, ngabe uzobiza ingokomoya, noma ngabe kunensangu noma amakhowe. Kubuye kube nokusebenza kwengqondo, akunjalo? Ingokomoya, Psychology. Kungukuphila kahle kwengqondo yethu. Sikhuluma ngempilo yengqondo, futhi yilokho okungokomoya futhi. Kufana nokuthi uma unempilo efanelekile yengqondo futhi unombono wokuthi ufana nani, “Uyazi ukuthi, noma ngabe uthatha i-PTSD noma umzimba, ubuhlungu bangempela, usengasebenza njengomuntu. Futhi abantu baphila ngaphandle kwalolo lwazi. Bahlala ngaphandle kwalowo muzwa omuhle. Ngoba bayesaba ukuyithatha ngoba akukho emthethweni.
Futhi yingakho ngicabanga, kumayelana nokuba nesibopho. Ngicabanga ukuthi sidinga ukuba nesibopho njengomphakathi. Sidinga ukuziphendulela emithethweni yethu futhi nathi kufanele siziphathe ngathi ngokwethu. Futhi uyazi, uma udla izidakamizwa ngokunganakekeli noma unemithethonqubo enganakekile futhi uvele ukhiphe ubugebengu ungenayo imithethonqubo, nami angiyikho leyo.
Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi sibe nalezi zingxoxo. Senza ucwaningo okudingeka ukuthi silwenze, futhi sinezingxoxo ezakhayo ebesingakwazi… Ngizothembeka, angazi ngokwami ​​ukuthi uhlaka lomthetho kufanele lube yini. Futhi yingakho imali yami engenzi nzuzo, angizukuqonde ngqo ekwenzeni ubugebengu njengamanje. Engizama ukukwenza ukukhulisa ukuqwashisa, hhayi okwenhlalo kuphela, okwami. Ngoba ngifuna ukuthola uhlaka lwezomthetho olulungile futhi kunezinye izindawo ezifana, bheka uKevin eDenver, ngikhulume naye. Wenze umsebenzi omuhle ekuholeni ukuthi iDenver isuswe emthethweni, wakhuluma nabafana abase-Oakland. Ngikhulume nabantu ezweni lonke futhi benze umsebenzi omkhulu.
Kepha njengamanje uqobo lwami, angizizwa kahle ngokubeka umthetho othile ngize ngiphakamise uqobo lwami nokuthi yilokho engizama ukukwenza ukuqwashisa amaFloridians phakathi kwezwe, phakathi komhlaba nami uqobo futhi ukuze size kusixazululo esifanele lapha maqondana nemithetho yakhona.
Hhayi-ke, kunzima. Sithuthukisa njengesitshalo noma into bese kuba sengathi sithi, “Heyi zingane, qhubekani nibheme ukhula, kodwa angifuni ukuba nesibopho sezingane zomunye umuntu ezigeja kuze kufike lapho ngithanda, angizange batshele ukuthi babheme ukhula. Ngiyazi ukuthi ayinabungozi, angikunikezi lutho. Kufana nokuthi ... Kodwa-
Ngingumsekeli wokuba nobuncane beminyaka. Ngicabanga ukuthi ukube bengizophuza le mithi ngisemncane, ngicabanga ukuthi mina, ubuchopho bakho angicabangi ukuthi bukhule ngokwanele. Kepha njengomuntu okhulile, uma uphuza le mithi ngenhloso ethile, noma ngabe yi-MDMA, kunobufakazi obuningi be-MDMA obusiza ngama-PTSD, amakhowe we-psilocybin, konke lokhu kuyizigaba ngaphakathi kwama-psychedelics. Futhi uma ungumuntu omdala futhi ubathatha ngenhloso efanele nangokuqonda okulungile, ngikholelwa ngempela ukuthi bangaba okwelapha. Kepha uma le mithi ihlukunyezwa, ingaba yingozi kakhulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sibe nengxoxo nje.
Kunjalo-ke nemithetho ye-cannabis eFlorida noma kunoma yisiphi isimo, ucela abantu ukuthi bathathe ulwazi olunengqondo, abazibonele lona, ​​umbono oqotho ngodaba oluyinkimbinkimbi abazizwa ngendlela ethile ngalo. Kulula kakhulu kothile ukuthi nje, “Cha, angikusekeli. Angifuni lutho. ” Ngoba ngaleso sikhathi akudingeki ukuthi benze okuthile okuzobenza bazizwe sengathi kufanele bangabaze noma yini, noma kufanele bashintshe okuthile okungakaze kube khona phambilini.
Ngakho-ke uthola le mithetho emisha ye-cannabis eFlorida lapho kufanele ube ne- $ 50 million noma e-Illinois lapho kunezicelo ezingama-4,000 zamalayisense angama-75. Ngakho-ke uyazi ukuthi abantu bazomangalela izwe lase-Illinois bese bezama ukuthola ilayisense. Futhi okungenani lobo buhlungu obukhulayo obukhona lapho sisebenza ngale nqubo yokuqinisekisa ukuthi sinoshintsho kwezomthetho. Kepha ngiqonde ukuthi, kuyadeleleka ukuthi kulula nje. Into elula nje ukuthi, "Akunjalo, babophe bonke."
Futhi lokho impela, lokho kufana nokwenziwa omasipala lapha eFlorida. Banelungelo ngaphansi komthetho wethu wokuvimbela izikhungo zokuhlinzeka. Ngakho-ke abaningi babo bathi, “Asifuni ukuza nokuthi uhlaka lwezomthetho kufanele lube yini esimisweni sethu. Kulula kakhulu kithi ukuba nelitha elilodwa elithi, 'Banqatshelwe ngokulandela iFlorida Statute 381.986.' ”Boom, sesiqedile. Akudingeki sikhathazeke ngakho. Ake abanye omasipala bakuthole lokhu. Zizoba amalebhu okuhlola. Lapho sebekwenzile abakwenzayo, khona-ke sizocubungula, sibuyekeze. Okuyikho ngempela okwenzekayo manje ukuthi labo masipala abanjenge-federalism bavumela izifundazwe ukuthi zibe ngamalabhorethri okuhlola-
Kuhle lokho. Manje sesingakhuluma nge-States Act. Ngicabanga ukuthi kwephula ukuchibiyela kwe-14. Ucabangani ngomthetho we-States?
Ngiqonde ukuthi, i-States Act inolimi oluningi oluhle kuyo, inolimi oluningi olubi kuyo. Ngithanda ukuthi ingxoxo okungenani iqhubekela phambili kuhlobo oluthile lukahulumeni wobumbano okungenani ngokuhlonipha umthetho wezwe ngezinga elithile. Futhi empeleni abantu abakuqondi ngomthetho kaHulumeni, kumane nje kuhlanganisa ubumbano futhi kuvumele iMelika ukuthi ibe ngamalabhorethri okulinga. Ngifisa ukwazi ukuzwa ukuthi yini ukuhlaziywa kwakho ukuthi kungani
Ngoba-ke kuthatha umthetho wesifundazwe futhi uhlobo lwama-plugs emithethweni yombuso. Ngakho-ke manje uphatha abantu bakahulumeni ngaphansi kwerubrikhi ehlukile yombuso futhi ngifana nokuthi ngise-Indiana, ngiyisigebengu, kepha uma ngingowase-Illinois ngokuziphatha okufanayo, ngingumuntu okhululekile. Futhi-ke ibeka lesi simo sesigqila, uhlobo lwenkinga yamahhala. Yebo akusona isimo sesigqila, kusho ubugebengu, kepha uma ungenza umuntu abe yicala, ungamenza isigqila ngokuya ngeSichibiyelo sesi-13. Ngakho-ke kwakha umthetho womfelandawonye ongafani nowodwa ophatha abantu ngokuhlukile kuye ngesimo abakuso ngesenzo esifanayo.
[inaudible 00:42:48] akunjalo, ngoba angiyena umfana wommeli, nginguchwepheshe nje lapha. Ngakho-ke kufana nokuthi intela yombuso yiyo ethi, "Kulungile, ngamunye wethu uzokwenza into yakhe," njengokugunyazwa kwe-cannabis, akunjalo. Futhi eminye imikhuba ayinayo futhi kusengokomthetho ngokungemthetho ngokuphelele. Ngokuya ngalolo daba, zingaki ezinye izingqinamba ezifana nalezi ezikhona eMelika?
Sonke singavuma ukuthi ingane iyabheda, kepha asikwazi ukuvuma ukuthi lesi sitshalo esibi kufanele sibe… Lokho kuyinkinga. Izenzo zombuso ngicabanga ukuthi yinto enhle, ngoba uma kuneminye imibuzo ejule kakhulu emphakathini wethu ukuthi izocasula. Kunemibuzo okufanele siyibuze, kepha lo mbuzo usuphenduliwe. Sidinga ukubhebhana sikhule, sibhalise izinto ezingeni elithile, sifundisane, njengoba sonke siyazi ukuthi ukuphuza ngokweqile kubi, futhi kuzokwenzeka [crosstalk 00:43:38]. Kepha uzo-
Ngicabanga ukuthi okubalulekile ukukuqonda ukuthi uma ucabanga ngezinkampani ezinkulu, kunzima kakhulu ukuthi zithathe izinqumo. Zithatha isikhathi eside. Banebhodi labaqondisi, banabaninimasheya okufanele baphendule kubo, uma ukhuluma ngezinkampani ezincane, bangenza izinqumo ezisheshayo. Kufana kakhulu nezifundazwe kuqhathaniswa nohulumeni wesifundazwe. Uhulumeni wesifundazwe ngumkhumbi omkhulu uzama ukujika futhi abakwazi nje ukwenza ujika oluphelele ngokushesha njengoba umbuso ungenza ithuba.
Futhi ngakho-ke bazama ukuthatha lezi zinyathelo zezingane futhi bazulazule enkingeni futhi bathole okuthile okuqhutshelwa phambili futhi kancane kodwa ngokuqinisekile ngiyaqiniseka ukuthi kuzoba khona ukulahlwa kwalokhu kuvinjelwa kombuso kwensangu. Umkhumbi nje mkhulu futhi kunzima kakhulu ukuwuhambisa.
Yingakho ngenza umthetho we-cannabis, ngoba uhlukile kakhulu futhi uhluke kakhulu. Yingakho abafana nami noThomas ngicabanga ukuthi… Kubalulekile uma ngitshela abantu ukuthi ngabe ufuna ukuqala inkampani yensangu futhi awusebenzeli nommeli owazi kahle ukuthi benzani nensangu, uzongena kuzo zonke izinhlobo zokubopha, ngoba ayifani neminye imboni. Abantu bangakuqhathanisa notshwala kwezinye zalezi zindawo zokuzithokozisa, akubona utshwala. Kujule kakhulu.
Ngabe niyazi yini ngomunye ummeli wephoyisa le-cannabis obesengxoxweni muva nje ezindabeni?
Ngempela. Umfana omele-
Parnof. Angikwazi manje, lo mfana, engikushoyo, noKeith Stroup basanda kuthumela i-imeyili kubo bonke abameli bezomthetho abajwayelekile ngaye, kodwa ngicabanga ukuthi ungummeli omkhulu wezokuvikela ngobugebengu ngomqondo wokuthi uthanda insangu nesigebengu sakhe amaklayenti ngokuzwakalayo, kepha angicabangi ukuthi bakubiza ngobunyoninco esikoleni somthetho. Ngicabanga ukuthi bakubiza ngentshiseko, kepha namanje yebo, angikhumbuli igama lakhe, kepha ungummeli wezigebengu
URoddy. Ngicabanga nje ukuthi yena [inaudible 00:45:38] phezu kwakhe ukulwela isimilo sensangu ezinkantolo, kodwa nokho ngesikhathi esifanayo wakhethelwa ukusiza ukuvikela lo mfana ophonswa lapho, njengezindaba zikazwelonke . Yebo, yimali, kodwa-
Bheka bese uthanda lokho. Uma ekhokha leyo mali ayitholile, evela kabi e-Ukraine bese eyikhokhela uSly noma noma ngubani igama lakhe, bese eyithatha ayiyise ebhange lakhe ayifake. Abamxoshi ngoba ungumuntu o-2 MRB. Manje, uma ngizama ukukwenzela inkampani yami yezomthetho, ngoba iklayenti lami lingikhokhela ama-50 amakhulu, lingikhokhela kahle u- $ 100,000 ukuze ngiyomangalela izwe lase-Illinois ukuze ngikwazi ukuthola ilayisense. Ibhange lami lingangivalela, ngoba bazofana nokuthi, “Cha, lokho kwehlukile uyabona, uma uvikela umuntu ngecala, kulungile. Kepha uma uvikela umuntu ukuthi aphule ubugebengu, uyi-2 MRB. ”
Yebo, yebo. Ngiqonde ukuthi, ngicabanga ukuthi lokho umehluko ngicabanga ukuthi thina njengabameli esikhaleni se-cannabis sisebenza ngokuqinile ngoba ngobuchwepheshe uma si… Uma uvikela isigebengu, uvunyelwe ukuvikela isigebengu. Kepha kuze kube yilapho insangu ingekho emthethweni ngokusemthethweni, uma uma uzama ukwenza ukuthengiselana nge-cannabis futhi wenza isivumelwano se-M & A, wenza isivumelwano se-real estate, noma ngabe kungaba yini-
Lokho kufana nokuthola ubugebengu bombuso obuhluke kakhulu khona lapho.
Ukuqonda, isidingo sabafana bakho, ukubaluleka kwabafana bakho. OkaTom nowakho uDustin maqondana nohlangothi lwezamabhizinisi, kufana nokuthi eMelika singaqedela kanjani ibhizinisi futhi, kungumphakathi wethu. Yindlela thina, izivumelwano zakho nokuthi yini. Akufani-
Yebo. Futhi ukubuyisela emuva kulokho ebesikhuluma ngakho nombuso [ongezwakali 00:47:49], manje abanye bathi kuzoba ubugebengu kanti abanye bathi ngeke kube ubugebengu. Idala zonke izinhlobo zokudideka. Lokho esingakaze sikubone embonini yisimo lapho la ma-MSO, ama-Multi-state Operators asebenzayo. Kufanele babe namalebula ahlukile nama-SOP ahlukile kuwo wonke amazwe angaphansi okufanele bawathobele. Akusebenzi kahle. Yingakho ngibandakanyeke kakhulu ku-ASTM D37 okuyizindinganiso zomhlaba wonke embonini ye-cannabis. Futhi kuze kube sinezindinganiso zomhlaba wonke zokuthi kufanele siyivivinye kanjani imikhiqizo yethu, ukuthi kufanele ifakwe ilebula kanjani, ukuthi kufanele ifakwe kanjani, kufanele ilahlwe kanjani.
Kuze kube sinezindlela ezijwayelekile zokwenza izinto, imboni isazoqhubeka nokungasebenzi kahle, futhi izindleko zokwenza ibhizinisi kulezi zinkampani zensangu zizoba phezulu kakhulu. Futhi yingakho ngicabanga ukuthi ezinye zalezi zintengo zesitoko ozibonayo ngilinganisela nomqondo engizishoyo ngezizathu eziningi. Kepha eyodwa yazo ilungile, akekho noyedwa obengabona kusengaphambili izindleko ezedlulele ezikhona ekulandeleni okulula kusuka kuhulumeni kuya kuhulumeni. Ngeke ube nokuthi, "Hheyi lawa ngamalebula ethu futhi yile ndlela esizothengisa ngayo kuwo wonke amazwe." Cha, izwe ngalinye uma uyi-MSO, udinga ukuthi zonke izifunda zinamalebula wazo bese uqagela ini? Kungcono uhlale uphezulu kunoma iluphi ushintsho olusemthethweni maqondana nalawo amalebula ngoba umthetho ushintsha ngokushesha okukhulu esifundeni ngasinye. Ngakho-ke musa ukuyothenga amalebula ayi-100,000 ngoba ungazisindisela amapeni ambalwa kuwo ngoba angashintsha ngakusasa. Ngakho-ke kunezinselelo eziningi nje.
Yep cha. Ngoba wonke amazwe angashadile yinto yawo. Futhi-ke kufanele ube nochungechunge lokuphakelwa kanye nochungechunge lokuphakelwa lusesimweni ngesisekelo sombuso uqobo. Ngoba wonke umkhiqizo kufanele ukhuliswe esimweni esithile. Ngakho-ke awukwazi ukuthola noma imiphi iminotho yokukala ekubeni ngumhlinzeki wangaphakathi ongakwenza ngalezi MSO. Kepha lokho ongakuthola kuyizindleko eziphakeme zokwenza ibhizinisi, ngoba futhi ngokushesha nje lapho othile ethola ukuthi ukulo mdlalo wensangu, kufanele ukhokhe yonke imali bese befaka amanani akho ngoba bacabanga ukuthi wenza imali anikele ngenqindi.
Futhi besikhuluma ngemuva kwesiteji mayelana nezinombolo ezithile zabalimi nokuthi hlobo luni lokugeleza kwemali abangakulahla. Yebo, ibhizinisi lokugeleza kwemali, kepha yibhizinisi elinemali nezimali ezinkulu. Ngakho-ke ngoba ikwazi ukuhamba kakhulu, akusho ukuthi akubizi imali enkulu ukukwenza uma uthola ilungelo lokukwenza. Futhi zonke lezi zinto zidala izinkinga.
Kepha enye yezinto okufanele sisebenzisane nayo eminyakeni eyishumi ezayo yikhodi yokuthengisa iyunifomu yensangu, noma ikhodi yezentengiselwano yensangu, noma okuthile okunjalo lapho uthatha khona futhi ukulinganisa lokhu. Ngoba izofana neminye imithetho, njenge-ERA isanda kufika kuleso sifundazwe sama-38. Kwaphasiswa ngeminyaka yama-70s, akunjalo. Kodwa-ke besinakho lokho, ngicabanga ukuthi bekukuchibiyela kwama-25 okwaphasiswa ngo-1789. Kodwa kwathatha kwaze kwaba yiminyaka embalwa edlule ngaphambi kokuthi ihlanganiswe ngempela. Angazi, angisiye isazi somthethosisekelo, angikaze ngibe yisazi somthethosisekelo.
Yebo. Ngoba empeleni, bekubalulekile empilweni yakho ngaleso sikhathi. Kepha kulungile. Futhi yingakho ngiyayithanda, ngoba ingudaba lomlando futhi luyinkinga engafani nanoma yini enye futhi inezicelo eziningi ezahlukahlukene. Ngakho-ke akuyona nje ezolimo, ukuhambisana, izinkampani, kuthinta zonke lezo zinto futhi kuyathakazelisa.
Futhi enye yezinto ebengifuna ukuyibiyela emuva sikhulume ngayo ukuthi eFlorida ekuqaleni yayiphansi iTHC bese singazi… Sasingenayo imbali ebhemayo futhi lokho kwashintshwa esimisweni sokugcina somthetho. Manje sesinembali ebhemayo, futhi ngizokutshela ukuthi abanikazi bamalayisense bamanje abakwazi ukuyikhiqiza ngokushesha ngokwanele-
… Noma ubani ubengabikezela ukufunwa kwembali. Futhi wonke umuntu wajabula ngezinkawu nazo zonke lezi ezinye izinto, imbali-
Mfowethu, ngakho-ke njengoba ubukhuluma ngezinombolo phambilini, konke lokhu kuyabikezelwa. Imakethe ye-cannabis inkulu kakhulu. Ukuthi nina bafana niqale ngabakhiqizi abane, [inaudible 00:51:48] isiko lenu, noma yini, ulwazi lomthengi wakho. Kepha manje usunabantu abaningi, ukuhlukahluka okuningi, ulwazi oluningi. Izophenduka into yayo, eyayo… Kunomuntu ongenza imicimbi. Kunomuntu ozoba… Njengakho konke okusizayo okwenzekayo njengokuthi ukhuluma ngakho nabathuthi nokuthi yini.
Lowo ngumbono omuhle impela lapho kukhona lokho kuqhekeka okuvulekayo ukuze uthole wonke lawo mabhizinisi asizayo laphaya. Kodwa usho okuthile ebengicabanga ukuthi kuyathakazelisa, ngoba angiyena ummeli waseFlorida. Angizimisele ukuthatha isivivinyo sebha eFlorida. Sizobona ukuthi kwenzekani ngokuzayo. Kepha-ke nina nenza isichibiyelo kumthethosisekelo bese isishayamthetho siqala ukwenza izinguquko kulokho? Ngoba uthe ukuchitshiyelwa kuthiwe, "I-THC ephansi, ayikho imbali ebhemayo." Futhi manje basuse i-THC ephansi kanye nesici sembali ebhemayo.
Ngakho-ke i-THC ephansi empeleni yayisebenzisa umthetho ngaphambi kokuchitshiyelwa komthethosisekelo. Ngemuva kwalokho ukuchitshiyelwa komthethosisekelo kwangena futhi kwavumela umkhiqizo ophakeme weTHC. Umthethosisekelo wawuthule maqondana nokubhema kodwa nge ... Kodwa kwakukhona amacala afakiwe futhi ngamacala, empeleni umbusi, ngenkathi umbusi engena, wabeka umgomo wokuthi wayengumgqugquzeli wensangu ebhemayo. Futhi ngakho-ke babuyekeza umthetho ukuze uvumeleke.
Kube nenkulumompikiswano enkulu ngokubeka ikepisi le-THC. Futhi kulokho engikuqondayo kule seshini elandelayo yomthetho, kukhona enye ingcindezi yokuzama ukufaka ikepisi le-THC ohlelweni lwethu lwensangu yezokwelapha. Ngokusobala, yilokho okuthakazelisayo ngomkhakha. Sihlala sizama ukuthuthuka, kepha futhi kufanele siqhubeke silwe ukuze sibambe isikhundla sethu. Ngakho-ke njengamanje bavunyelwe ukuba nensangu yezokwelapha ephakeme yeTHC eFlorida. Kepha lokho [crosstalk 00:53:38] -
Ngabe nina bantu nithanda izibaya ze-vape? Ngoba lokhu kuyi… Kungumusa wemvelo enhlalakahleni, kepha cishe kwakungu-80% ama-cannabinoids ngenkathi
Yebo, sinezibaya ze-vape. Esingenakho, ngakho-ke kuyathakazelisa ukuthi umthetho uvumela ukudla okudliwayo, kepha uMnyango we-Ag noMnyango wethu Wezempilo kufanele basebenzisane emithethweni edliwayo futhi nemithetho edliwayo ayikaphumi. Ngakho-ke njengamanje eFlorida asinakho okudliwayo, engicabanga ukuthi ngu… Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bakhetha okudla futhi kuyishwa ukuthi iziguli zethu azinakho ukufinyelela kokudla. Enye into ethokozisayo eFlorida esisalinde yona ukuthi abakagunyazi noma yimaphi amalebhu okuhlola avela eceleni eFlorida.
Yebo, ngimele iGreen Scientific Labs, engenye yamalebhu okuhlola uNdunankulu lapha eFlorida. Futhi bona, umnyango wezempilo awukazibekeli phansi ukubeka imithetho yesithathu yokuhlola. Manje bavele babeka umthetho ophuthumayo ongakaze wamukelwe ozobeka… Ngakho-ke njengamanje la malebhu okuhlola abantu besithathu, uMnyango Wezempilo uyawavumela ukuthi aphathe insangu nje ngokwesivumelwano. Ayikho ilayisense amalebhu okuhlola avela eceleni, kufanele anikezwe isivumelwano neMMTC, iMedical Marijuana Treatment Center ukuze akwazi ukwenza lokho kuhlola, okudala zonke izinhlobo zezinkinga. Futhi ngokuthembeka impela, njengamanje eFlorida ukuvivinywa kuzilawula ngandlela thile, okusho ukuthi bheka, lawa ngamabhizinisi futhi uma kungadingeki bahlole okuthile, uma bengabiza ababo-
[crosstalk 00:55:05] ozilawulayo, kufanele ubhekane ne-FAA. Kepha lokho kuza e-Illinois futhi lapho bengenayo… Ngisho, basho izinto ngokuhlolwa. Kukhona amalebhu okuhlola kepha awakawavuleli amalebhu amasha wokuhlola futhi lokho kungaphezulu kwalelo bhizinisi elenzayo. Bazama ukukhawulela ukugxila eWashington State, akunjalo?
Ikakhulukazi [engezwakali 00:55:37] indlela, ayiyeki. Iyabuya futhi ifane nokuthi, "O, oh, uyisebenzisa ngendlela egxilile?" "Yebo."
Imibuzo engingayibuza kuphela ukuthi, "Kungani? Kungani kubaluleke ngokungazelelwe ukuthi sibe nale mikhawulo? ”
Yebo. Yebo, bekukhona… Futhi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule balethe abantu abaningi, odokotela abaningi, abadlali abaningi abangaphandle kwezwe abebephikisana nensangu naseTallahassee bekunezikhulumi eziningi ukuphuma lapho. Futhi babenezikhathi zokwaziswa nokulalelwa lapho labo dokotela babekhuluma ngokuyisisekelo ngobungozi bemikhawulo ephakeme ye-THC. Futhi ngizokutshela, kudale intukuthelo enkulu nodokotela abaningi engisebenza nabo. Futhi uyazi, manje sebeqala ukuzifakela amaseshini olwazi, bachaza ukuthi kungani kubalulekile ukufinyelela empeleni i-THC ephakeme.
Futhi ngokwethembeka njengamanje, kungaba yini… uma bezokwenza okuthile lapho bekhiphe khona inani leTHC. Okuthokozisayo yizo zonke izingqinamba nazo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo ezikhulayo njengamanje noma ingxenye enkulu eye-THC ephezulu, akunjalo? Ngakho-ke uma lowo mthetho ubungangena, empeleni izinkampani zaseFlorida bekufanele zenze futhi nazo zonke izingcindezi nazo zonke izinhlobo nakho konke okwenzayo, okungadala inkinga yonke ngokufinyelela kwesiguli nazo zonke izinhlobo zezinkinga ezahlukahlukene. Nginethemba lokuthi-
Kubukeka sengathi bazama ukukhawulela amazinga we-THC.
Yini uphahla oluphezulu abazama ukulinganisela kulo?
Cha, lokho kufana nokuthi, ukube besino-Ethan Russo, uDkt Russo emoyeni, ubezofana nokuthi, "Cha, lelo yizinga lesibili le-cannabis Chemovar." Ngomqondo wokuthi yilabo abalinganiselayo, ngoba unesilinganiso esingu-20 kuye kokukodwa, okuvame ukuba yi-CBD hemp yakho, njengezinkinga zakho zokuphakamisa. Futhi-ke unesilinganiso esiphikisayo kwesinye isikhathi kuba konke nje iTHC futhi okungafana neGlue Glue yakho. Futhi-ke uma ukwenze njengomuntu ophakamisa i-gorilla, lokho-ke kufanele kube ngaphezu kokulinganisela kwe-one-one THC CBD ratio. Futhi lezo zingadlula i-10%, ngakho-ke kusazodingeka ukuthi ubuke imbali yakho. Futhi-ke uma uthola, kungafana nokuthi manje sekuzodingeka ukhethe wonke ama-apula uma engakavuthwa.
Ngicabanga ukuthi yini, sizobhema kakhulu. Uma ukhulume kakhulu ngensangu engu-10% THC, uzodla insangu eningi futhi mhlawumbe uzophakama kakhulu. Uvele usebenzise imali eningi. Ngakho-ke kuzolimaza umthengi, isiguli okufanele sithenge insangu eyengeziwe ukuze nje sifinyelele-
Alikho ikhaya lesineke elikhula eFlorida okwamanje, akunjalo?
Angicabangi ukuthi abanikazi bamalayisense abangama-22 bazofuna ukukhula kwekhaya kwenzeke nhlobo.
Yebo, bheka, angazi. Kepha ekugcineni kosuku, laba bantu abanamalayisense abangama-22, njengoba ngishilo, eFlorida yimakethe enkulu kakhulu. Laba bantu abanamalayisense abangama-22 banemali eningi ngemuva kwabo futhi iningi lama-lobbyist aseTallahassee njengamanje alwela bona. Ngakho-ke leso ngesinye sezithiyo ezinkulu obekuzodingeka ukuthi usinqobe iqiniso lokuthi uzoba nalaba bantu abanamalayisense abangama-22 abachitha imali eningi yokunxenxa amadola ukugcina ikhaya likhula liphuma ku- [inaudible 00:58:40]. Manje bheka, angazi, kungahle kube… Angikaze ngikhulume, angifuni ukukhuluma egameni labo bonke abanamalayisense. Mhlawumbe abanye babo bayayisekela. Kepha ngombono obanzi, ngokunokwenzeka bazothatha uhlobo oluthile lwesimo uma kuqhathaniswa nokukhula kwekhaya.
Uyazi, nina bafana nilahlekelwa yimali eningi kakhulu ngokukhomba ukuthi ezokungcebeleka nazo zizoya kumadola ezokuvakasha. Ngoba njengamanje i-100% yakho yezokwelapha iqinisekisiwe. Ngiqonde ukuthi, kungahle kungabi nalokhu abakubiza ngokuthi ukuphambukisa, shiya umbuso, yini. Kepha ngiyakuqinisekisa ukuthi okuningi kokuthengwa kwezokwelashwa kuya kubahlali bendawo, iziguli ezingezona ezokwelapha. Ngakho-ke lapho nje sebenakho lokho kuthenga kwezokwelapha kwezokungcebeleka, noma ukuthengwa kokungcebeleka, uzobe udonsela kulowo mfana obedonsa lokho akubiza ngokuthi yimakethe emnyama, kepha ngumngane wakhe ongudokotela. Awutholi leyo makethe kanye nezokuvakasha. Njengani bafana nibambezele ezokuvakasha, yilokho eniphila ngakho.
O, lokho kusile. Ngisho, yingakho laba bantu bechitha imali engaka kwilayisense ezansi lapha, akunjalo? Ngisho, bheka, abakwenzeli iziguli ezingama-300,000. Bakwenzela abantu besigidi esingu-20 esinabo, kanye nakho konke ukuvakasha esinakho. Ngakho-ke laba bantu abekho… Asinabo abantu abasayina amasheke ama- $ 50 million ngesiqephu sephepha ngoba becabanga ukuthi bangakwazi ukufinyelela ezigulini ezingama-300,000. Bayakwenza ngoba bayabona ukuthi uma ezokungcebeleka zenzeka lapha eFlorida, kuzoba ithuba elihle kakhulu. Futhi ngokwethembeka impela, kuzoba yizigangi.
Kuzoba neningi, nemali eningi ezokwenziwa. Kuzoba nomncintiswano omkhulu. Uyazo ukuthi ngisho ukuthini? Bheka, ekugcineni kosuku, kufana nebhizinisi. Kufanele ukwazi abafana, ngitshela abantu abaningi, bafuna ukungena kulo mkhakha, bacabanga ukuthi kulula imali. Cha, lifana nelinye ibhizinisi. Ufanele uhlakaniphe. Kufanele usebenze nabantu abazi ukuthi benzani, usebenze nabameli abafanele, ababali abalungile, abantu abafanele bezezimali, abatshalizimali abalungile, futhi kufanele uncintisane. Njenganoma yiliphi elinye ibhizinisi. Ayikho indlela elula yokwenza imali-
Kuhle lokho, okungasibuyisela entweni esingahle siyisonge lapha. Ngakho-ke uDustin, wensangu yaseFlorida ngo-2020, yini oyibonayo yenzeka?
Yebo, insangu yaseFlorida ngo-2020? Ngakho-ke njengamanje leli cala leNkantolo Ephakeme lenzeka. Nathi sinawo lowo mthethosivivinywa engikhulume ngawo osesishayamthetho. Angiboni ukuthi lowo mthetho uyadlula. Nginethemba, uma kwenzeka ngaleso sikhathi lokho kungaba kuhle, sizozijabulisa lapha. Angiboni ukuthi lowo mthetho uyadlula. Angiboni ukuthi isishayamthetho senza noma yini kuze kube yilapho inkantolo Ephakeme yaseFlorida yenza isinqumo ngalelo cala. Icala, icala laseFlorida Elikhulile. Leyo yinkampani efake isimangalo futhi ngiyethemba ukuthi iNkantolo Ephakeme izokhipha isinqumo ngalokho ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, icabanga ukuthi ziqinisekise izinkantolo eziphansi. Isishayamthetho mhlawumbe kuzodingeka sibuyele emuva esimisweni esikhethekile. Kuzofanele babuyekeze umthetho. Sonke siyazi ukuthi inqubo yomthetho ingathatha kanjani isikhathi eside.
Lapho-ke i-DOH kuzofanele ikhiphe imithetho emisha bese kuthi i-DOH kudingeke ukuthi idedele izicelo. Futhi-ke bazoqala ukwamukela izicelo. Ngakho-ke, nginethemba elikhulu lokuthi kungenzeka sibe namalayisense athile akhishwe ngo-2020. Angingabazi neze ukuthi sizoba namalayisense akhishwe ngo-2020. Okungenzeka ukuthi ngeke kube khona amanye amalayisense akhishwe kuze kube okungenani 2021 ngeshwa.
Kepha nginethemba, yingakho ngisebenza kakhulu kwezinye izifundazwe. Kungakho ngisebenze nawe kwezinye zezicelo ze-Illinois. Ngihlela ukusebenza nawe kwezinye zalezi zicelo ezingeziwe esizitholile. Ngithole iqembu eWest Virginia. Ngithole iqembu lomsebenzi eGeorgia engisebenza nalo. Ngempela sisebenza namaqembu ahlukahlukene ahlukahlukene yonke indawo ukubasiza bathole ukufinyelela. Futhi eziningi zazo yizinkampani ezizinze eFlorida ezifuna ukunwebeka nakwamanye amazwe, ngakho-ke.
Kepha kunezinto eziningi okufanele zenziwe. Nginethemba lokuthi, njengoba ngishilo, imithetho yesithathu yokuhlola ilebhu, nginethemba lokuthi izophuma. Nginethemba lokuthi kuzoba namalayisense amanye alawa malebhu okuhlola avela eceleni ukuze… Futhi futhi, uzungeze emuva, kumayelana nesiguli. Ngifuna ukuthi isiguli sithole umkhiqizo omuhle kakhulu ongawuthola. Futhi uma lo mkhiqizo ungazilawuli ngokwako maqondana nokuhlolwa, kunezingozi eziningi ukuthi lo mkhiqizo ofakwa emakethe yaseFlorida awuvivinywa ngokuphelele futhi-
Kuzothatha ukukhumbula okukodwa noma omunye umuntu athole induku yangempela. [crosstalk 01:02:36] Manje abantu bangakutholaphi ndoda?
Bangangithola, inkampani yami yabameli iyi-www.mrcannabislaw.com, leyo M-Rcannabis law.com. Ungangilandela nakuyo yonke imithombo yezokuxhumana ku- # mrcannabislaw.
Kuyesabeka. Ngiyabonga kakhulu ngokuza embukisweni [crosstalk 01:02:55]. Futhi njengoba iFlorida ithuthukisa izinto ezintsha, sicela ubuye futhi wabelane ngakho ku…
* UTom Howard ku- I-CannabisIndustryLawyer.com
* UMiggy ku Izindaba ze-Canannis Legalization